Shaqiri Oo Laba Kooxod Amaaha Ku Doonayaan | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Reds ayaa hayn doonta xiddiga reer Switzerland ilaa ugu yaraan dhamaadka xilli ciyaareedkan inkasta oo uu ku dhibtooday inuu boos joogto ah ka helo
Liverpool ayaa iska diiday dalabyo amaah ah oo uga yimid kooxaha AS Roma iyo Sevilla ee ku aadan Xherdan Shaqiri waxayna sii hayn doonaan xiddiga reer Switzerland ilaa ugu yaraan dhamaadka xilli ciyaareedka.
Shaqiri ayaa soo jiidanaya xiisaha kooxo badan oo Yurub ah ka dib markii ay ku guuldareysteen inay boos joogto ah ka helaan kooxda Jurgen Klopp xilli ciyaareedkan.
Sevilla, ayaa agaasime isboorti Monchi, waxay sameysay qaab rasmi ah oo ay amaah kula soo saxiixane Shaqiri bishaan, halka Roma ay la xiriirtay dhexdhexaadiyeyaal. Labadoodaba waxaa loo sheegay in Liverpool aysan dooneynin inay daaqadda ka tuuraan xiddigii hore ee Stoke City
Wararka ka imanaya Italy ayaa sheegaya in Reds ay Diidaya Qimaha € 15 milyan (£ 12.75m / $ 16.7m) oo ah qiimaha ay ku weydiinayaan Shaqiri.
Xaqiiqdii, ilo wareedyada Anfield ayaa u sheegay in Liverpool ay dalban doonto labanlaab lacagtaas hadii ay dooratay inay iska iibiso xagaaga, isla markaana ay ku kalsoon yihiin inay heli doonaan Qimaha ay ku doonayaaan Shaqri.